TWS နားကြပ်နှိုင်းယှဉ် | Androidsis
ဒီ post မှာတော့မင်းကိုယူလာပေးတယ် စမတ်ဖုန်း၊ နားကြပ်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခု။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများကကမ်းလှမ်းသောအရေးအကြီးဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာဂီတကိုနားထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မကြာသေးမီက၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသိသိသာသာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းများကိုစီးရီး၊ ရုပ်ရှင်၊
နားကြပ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပြီး၎င်းတို့မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့မနေနိုင်တော့ပါ။ ထုတ်လုပ်သူအမြောက်အများကဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပြီးတော့စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးနဲ့အတူရှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူတာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။ နှင့်ဒဏ္myာရီ jack ကို connector ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်အချို့စက်ပစ္စည်းများခံစားခဲ့ရသည့် involution နှင့်အတူ, ကြိုးမဲ့နားကြပ်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဒီ post မှာလည်းဒီကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူရန်ဈေးလျှော့ပေးပါမည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်း.
2.1 အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၊ မော်ဒယ်သုံးမျိုး - TWS Vigorun, TWS i7 နှင့် TWS x9
2.4 TW9 xXNUMX
စမတ်ဖုန်းလောကပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသကဲ့သို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိပြီးအရှိန်အဟုန်မှာအလွန်တုန်လှုပ်သည်။ ဘလူးတုသ်နားကြပ်သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ သူတို့ခေတ်မီခဲ့ကြပြီ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် mobility ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများကြီး။ ပထမဆုံးစျေးကွက်သို့ဝင်လာသည့်မော်ဒယ်လ်များသည်နားကြပ်နှစ်ခုစလုံးကိုဆက်သွယ်ထားသောကေဘယ်လ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တည်ရှိပြီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဘက်ထရီအချို့။
အများဆုံးခေတ်မီမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုပါ True Wireless Sound ဟုခေါ်သည့်နည်းပညာကို ဒီကုမ္ပဏီကိုနာမည်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုကောက်များ (TWS) ။ သူတို့ကနားကြပ်တွေပါ ကြိုးမဲ့အားလုံးကိုစွန့်ခွာသွားစေသည့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ကြိုးမဲ့စနစ်။ သို့သော် Bluetooth နားကြပ်သည် True Wireles နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
နားကြပ်၏ဤအယူအဆတွင်ဘယ်နှင့်ညာလမ်းကြောင်းများအကြားဆက်သွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးမရှိတော့ပါ။ The ဆက်သွယ်မှုလုံးဝလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ် နှင့်ကြိုးမဲ့ပင် သီးခြားစီ။ အစပိုင်းတွင်ဘလူးတုသ်နားကြပ်များထက်အသံအရည်အသွေးနိမ့်သော်လည်းဤအရာသည်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
ယခု နားကြပ်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘက်ထရီရှိသည်နှင့် သီးခြားစီ device ကိုမှချည်နှောင်။ သူတို့အချင်းချင်းလည်းချိတ်ဆက်ပြီးစတီရီယိုအသံပေးနိုင်သည်။ သံသယလည်းကြိုတင်လုပ် ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုချင်းစီကို earbud အပေါ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည် အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပုဒ်ပြောင်းလဲခြင်း၊
၎င်းတို့သည် Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်ဤစတိုင်၏ပထမဆုံးကြိုးမဲ့နားကြပ်မဟုတ်ပါ။ Aermoo ကုမ္ပဏီက၎င်းနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည် Aermoo B3။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့်နားကြပ်များကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီး၎င်းသည်ဘားကိုသေချာစေသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါတို့အာရုံစိုက်ကြတယ် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ TWS နှင့်၎င်း၏သုံးအခြားနည်းလမ်း။ တူညီတဲ့စတိုင်၏နားကြပ်သုံးခု ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောတစ်ခု။ ကြိုးမဲ့နားကြပ်ရှာဖွေနေပါသလား။ ဤစာမူတွင်ဤအဆိုပြုချက်သုံးခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သို့ထင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
အယူအဆတွင်အဆိုပြုချက်သုံးခုသည်လွန်စွာဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် True Wireless နည်းပညာဖြင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များဖြစ်သည်။ ထိုသုံး ဦး စလုံးနှင့်အတူလာကြ၏ charger တစ်ခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သော၎င်း၏အဖုံး။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီမှပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျန်သူများနှင့်ပင်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအရ၎င်းတို့တင်ပြသောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၊ မော်ဒယ်သုံးမျိုး - TWS Vigorun, TWS i7 နှင့် TWS x9
တစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ရအောင် ဒီနားကြပ်များ၏ သီးခြားစီ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ တူညီမှုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်ရန်။ အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုရှာဖွေနေပါကဤရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုသည်သင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်လည်းသင့်တော်မည်။
Vigorun မော်ဒယ်သည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် အကြီးဆုံးသေတ္တာ / charger ကို သုံးယောက် ဒါ ပလပ်စတစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, လက်၌တစ်ချိန်ကအများကြီးအရည်အသွေးမထင်ထားဘူး။ နိဂုံးချုပ်အဖွင့်ကတော့ငါတို့သုံးယောက်ထဲမှာအနည်းဆုံးပဲ။ ၎င်းကိုပိတ်ရန်အတွက်“ click” ကိုကြားသည့်တိုင်အောင်နှိပ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းကိုဖွင့်ရန်၊ ၎င်းကိုမည်သို့ယူရမည်ကိုကောင်းစွာမသိဘဲ၊ ၎င်းကိုအင်အားဖြင့်ဆွဲတင်ရန်လိုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မပြိုကွဲအောင်ဂရုစိုက်ပါ။
El တောက်ပအနက်ရောင်အရောင် ချက်ချင်းလက်ငင်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းသည်နေရာတိုင်းတွင်သဲလွန်စများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ တစ်ခုရှိ စိမ်မှောင်မိုက်အဖုံး ဥပမာအားဖြင့်၊ နားကြပ်တွေကိုသူတို့အားသွင်းနေ၊ မနေကိုသိစေတယ်။ ၎င်း၏အထက်ပိုင်း, လက်ဝဲဘက်မှာရှိပါတယ် ညွှန်ပြလေး LEDsမီးဘယ်ပေါ်လာမလဲ တာဝန်ခံ၏ပြည်နယ် အမှု - charger ကို၏။
el en ဘယ်ဘက် အဆိုပါရှိပါတယ် port ကိုတင်ဤကိစ္စတွင်အကြောင်းပါသော USB mini။ ဤကိရိယာအားလုံးကဲ့သို့ပင် box ထဲတွင် USB cable ကိုသေတ္တာနှင့်နားကြပ်များအပြင်၌သာတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နံရံပေါ်အားသွင်းရန် connector မရှိပါ ဒါကြောင့်ငါတို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံး (သို့) ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အားသွင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။
TWS Vigorum အားသွင်းစက်အနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် သုံးအပြည့်အဝတာဝန်ခံသံသရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကြပ်ရန်။ ဒါပေမယ့် box ကိုသူ့ဟာသူ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းပါတယ်မျက်နှာသာအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအချက်။ ၁ နာရီနှင့်နားကြပ်မှမိနစ် ၅၀ အတွင်းဘက်ထရီအား ၁၀၀% ခံစားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နားကြပ် ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဆက်သွယ်ပြီးအလိုအလျောက်တွဲ။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် လုံခြုံစွာကိုင်တွယ်နိုင်အောင် ergonomic ဒီဇိုင်း။ စက်ဘီးစီးပြီးစီးမယ်ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးစီးပြီးစီးမယ်၊ ငါတို့ဆုံးရှုံးမယ်၊ သူတို့လဲကျမှာကိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။
ကျနော်တို့ရှာသောအသံသည် HD စတီရီယိုအသံအရည်အသွေး။ ပြီးတော့ငါတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာကဒါကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အံ့သြစေတယ်။ Vigorum ပြင်ပဆူညံသံလျှော့ချရေးနည်းပညာရှိသည်။ ၎င်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှားပါးသောစွမ်းအင်ကိုပေးနိုင်သည့်အရာတစ်ခု။
သင် TWS Vigorun မော်ဒယ်ကိုကြိုက်လျှင် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။။ ယခုမှာသင်သည်ရပြီ VIGORUNA ကူပွန်ကို သုံး၍ ၂၅% လျှော့စျေး.
TWS i7 မော်ဒယ်ကပြသထားတယ် Vigorum မော်ဒယ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကိုတည်ဆောက်ထားသည့်ပစ္စည်းများသည်လက်တွေ့ကျသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုယ်နှိုက်တွင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှာပါ။ Box-charger မှာလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီးအချိုးကျမျဉ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ The box ကိုဖွင့်လှစ် တစ် ဦး နှင့်အတူလည်းကွဲပြားခြားနားသည် ကြယ်သီး ယင်း၏ရှေ့အပေါ် ကျနော်တို့နှိပ်ရပါလိမ့်မယ် အဖုံးဖွင့်လှစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲ, ဒီစနစ်ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေသည်။
El အရောင် အတူတူပါပဲ တောက်ပအနက်ရောင်, ဒါကြောင့်လက်ဗွေများနှင့်အတူတူပင် "ပြproblemနာ" ရှိပါတယ်။ သေတ္တာတစ်ချိန်ကသင်၏လက်၌ကပုံရသည် Vigorum မော်ဒယ်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကြောင့်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြောင့်ဖြစ်သည် သေးငယ်အရွယ်အစားနှင့်ခလုတ်ဖွင့်သည့်စနစ်ရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြိုကွဲရန်ကြောက်ရွံ့မှုနည်းပါစေ။
ဒီမော်ဒယ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်,4LED မီးလုံးမရှိပါ ကြောင်းတာဝန်ခံအဆင့်ကိုညွှန်ပြ။ သာ အလင်းနည်းနည်းနှင့် မျက်တောင်ခတ်၏နံပါတ်ပေါ်မူတည် တစ်စက္ကန့်မှာလုပ်နိုင်တယ် ဘက်ထရီမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိပါ။ စနစ်တစ်ခုသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ရှိနိုင်သည်။
သေတ္တာထဲမှာငါတို့အတိအကျသေးငယ်တဲ့ပြintoနာသို့ပြေးကြပြီ။ နားကြပ်ကို magnetized ဟုထင်ရသည် နေရာကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိရန်အားသွင်းရန်အခြေအနေနှင့်, ဒီဟာကလုပ်သင့်သည်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ နားကြပ်ကိုခြေရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းဖြင့် ဖိ၍ ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာတစ်ခုခု ၎င်းကိုအဖုံးပိတ်ပြီးဖြေရှင်းသည်, သူတို့perfectlyုံမိမိတို့နေရာ၌နေရာချနိုင်အောင်သူတို့ကဖိနေကြသည်။
El အသံက ဒီနားကြပ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် HD စတီရီယို နှင့်ကကမ်းလှမ်းအရည်အသွေးကိုတကယ်ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါဘေ့ကောင်းသောခံစားရသည်နှင့် အသံကကြည်လင်ပြတ်သားပြီးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။ ကိရိယာနှင့်နားကြပ်များအကြားအလိုအလျောက်တွဲဆက်မှုသည်မြန်ဆန်။ အဆင်ပြေပါသည်။ ဒါ့အပြင်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် ကောင်းသောချုပ်ကိုင် ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်လျှင်ပင်မလှုပ်ရှားသောနား၌။
နားကြပ်ကိုယူပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။။ ဒါ့အပြင်အတူ HK4RRAF6 ကူပွန်တွင်သင်အပို ၂၅% လျှော့စျေးရှိလိမ့်မည်.
ကျနော်တို့စမ်းသပ်နေသောနားကြပ်သုံးခု၏နောက်ဆုံး, ဗေဒကအထက်ပါမဆိုတူပါဘူးအနည်းဆုံး၎င်း၏ box-charger ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ မှစ အများကြီးပိုကောင်းအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုပစ္စည်းများတစ်ရွေးချယ်မှုနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းကို။ ပြီးတော့ လျှောဖွင့်ပုံစံကိုလျှော ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ကိုပေးတယ်။
သေတ္တာနှင့်နားကြပ်ကိုယ်နှိုက်တွင်၊ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်း။ အခြားမော်ဒယ်နှစ်မျိုး၏ semi-translucent ပလပ်စတစ်အဖုံးများသည်အရည်အသွေးနိမ့်ပုံကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တောင်မှ ထိတွေ့မှုနှင့်အလေးချိန် နားကြပ်နှင့် box ကို set ကနေ ပိုပြီးသင့်တော်ပုံရသည်.
El သတ္တုမီးခိုးရောင်အရောင် ၎င်းသည်အခြားဆွဲဆောင်မှုနှစ်မျိုးနှင့်မတူသည်မှာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် သန့်ရှင်းရေး " ကတည်းကခြေရာသိသာမဟုတ်သောကတည်းက။ ဖော်ပြရန်မ နှစ်သိမ့်မှုနှင့်လုံခြုံမှု ဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ အဖွင့်နှင့်ပိတ်စနစ်။ အင်အားကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့သူတို့ကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီးပိတ်နိုင်တယ်။
အရာအားလုံးနီးပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံသည်သာ။ ကောင်း၏။ TWS x9 falter အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခု၌တည်၏။ ၏ရှုထောင့်၌တည်၏ ဘက်ထရီစွမ်းရည် နားကြပ်နှင့်အားသွင်းအဖုံးနှစ်ခုလုံးသည်နောက်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ ပြိုင်ဘက်များအားလေးစားမှုဖြင့်အချက်များကိုနုတ်ပေးသောအရည်အသွေးတစ်ခုသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအားရွေးချယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Cesar ကဘာလဲ Cesar ကဘာလဲဆိုရင် x9 ကသိပ်ဝေးတယ်။ အများဆုံးအသံစွမ်းအားကိုကမ်းလှမ်းနိုင်စွမ်းသောသူတို့ကို။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သောနားကြပ်အားလုံးနီးပါး၏အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မြို့တော်ရဲ့ဆူညံသံ၊ ကားတွေစသဖြင့်လမ်းပေါ်မှာသုံးပြီးအများဆုံးအသံပမာဏကနည်းနည်းလေးပဲ။ ဒါက x9s နဲ့မင်းမဖြစ်နိူင်ဘူး။
ဒါဟာရှိပါတယ် အများဆုံးပါဝါ ဘလူးတုသ်နားကြပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာစမ်းသပ်ဖို့အသုံးမပြုဘူးဆိုတာပါ။ ပြီးတော့ငါတို့ဒီကိုထည့်လျှင် ကြည်လင်သောအသံအရည်အသွေးနှင့်နက်ရှိုင်း။ ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောဘေ့စ်အသေးငယ်ဆုံးဘက်ထရီအပြင်၎င်းတို့သည်ရွေးချယ်မှုသုံးခုတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလား။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။။ ထိုကျေးဇူးတင်စကား ArbilyY9 လျှော့စျေးကုဒ်သည်သင် ၂၅% ပိုသက်သာနိုင်သည်.
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုသင်ရှာဖွေနေပါကဤရွေးချယ်မှုသုံးခုမှတစ်ခုခုသည်သင့်အားအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အားလုံးသုံးကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်ကပ် အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အသံအပိုင်း။ ပြီးတော့သူတို့ကသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းနိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့တစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး အလွန်ဆင်တူသည်။ အများဆုံးရွေ့လျားမှု, ကောင်းသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကောင်းသော fixation ဒါကြောင့်သူတို့လဲကျမကျဘူး
ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ Bluetooth သို့ရောက်ရှိနိုင်သောအကွာအဝေးအသေးအဖွဲကိစ္စများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အကြီးမားဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်၌တွေ့ရသည် နားကြပ်နှင့် box-charger ကို၏။ ထို့ကြောင့်တူညီမှုများစွာရှိသည့်တိုင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး အတွက်အရသာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရာရောက်သည်။
သင့်ရဲ့သံသယရှင်းလင်းဖို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုပူးတွဲပါ ဘယ်မှာငါတို့ကသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်စုံတစ်ရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများအနက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးကိုရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ သေချာသည်မှာရွေးချယ်မှုသုံးခုမှတစ်ခုခုသည်အပြုသဘောဆောင်သောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရှိရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်တတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ ထုတ်ကုန်များကိုအပို ၂၅% လျှော့စျေးဖြင့်ရယူပါ ဤကူပွန်များကို Amazon - ArbilyY9 (X9 အတွက်) HK4RRAF6 (Y7 အတွက်) နှင့် VIGORUNA (Vigorun) တွင်အသုံးပြုသည်။
ပုံစံ အားမာန် i7 x9
ဘလူးတုသ် 4.2 5.0 5.0
အကွာအဝေးအကွာအဝေး 10 မီတာ 15 မီတာ 15m
ဂီတဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း 2.5 horas ၁၂-၂၄ နာရီ ၁၂-၂၄ နာရီ
စကားပြောဆိုမှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 2.5 horas ၁၂-၂၄ နာရီ ၁၂-၂၄ နာရီ
ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာအဆင်သင့်ရှိသည် + နာရီ 100 + နာရီ 100 + နာရီ 100
ဘက်ထရီ box-charger ကို 450 mAh ဘက်ထရီ 800 mAh ဘက်ထရီ 400 mAh ဘက်ထရီ
နားကြပ်ဘက်ထရီ 50 mAh ဘက်ထရီ 50 mAh ဘက်ထရီ 40 mAh ဘက်ထရီ
အလိုအလျောက်တွဲဖက်မှု SI SI SI
ဆူညံသံပယ်ဖျက်ခြင်း SI NO NO
အကြိမ်ရေ 20 Hz - 20 KHz 20 Hz - 20 KHz 20 Hz - 20 KHz
Carga USB mini USB mini USB mini
ထိန်းချုပ်မှု ကြယ်သီး ထိတွေ့နိုင်သော ထိတွေ့နိုင်သော
စျေးနှုန်းများ 45.99 € 48.99 € 45.99 €
ဝယ်ပါလင့်ခ်များ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » TWS နားကြပ်နှိုင်းယှဉ်